Amaanta ayaa muujineysa - Roy Keane
Amaanta ayaa muujineysa – Roy Keane
Roy Keane ayaa soo jeediyay in Bruno Fernandes uu wali u baahan yahay inuu cadeeyo inuu yahay laacib wanaagsan wuxuuna sheegay in ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United uu ku guuldareystay inuu soo bandhigo qaab ciyaareedkiisii ​​kulankii Arbacadii ee semi-finalka Carabao Cup.
Red Devils ayaa laga badiyay kulankii afaraad oo isku xigta oo ay ku wajahaan Manchester City garoonka Old Trafford ka dib goolal ay kala dhaliyeen John Stones iyo Fernandinho markii City ay martigelisay Tottenham finalka bishii Abriil.
Inkasta oo Keane uu dareensan yahay in United ay si fiican u ciyaartay laakiin ay ku jirtay koox ka fiican Man City, haddana wuxuu dareemayaa inay ahayd masuuliyadda Fernande inuu ka soo kaco kulamada waaweyn isla markaana uu kooxda ku hoggaamiyo koob.
Markii la weydiiyay sida United ay ku soo afjari karto afar guul darro oo ka soo gaartay FA Cup iyo Sevilla oo ka tirsan Europa League, Keane ayaa u sheegay Sky Sports.
“Ma ahan wax fudud, ma sahlana inaad ku guuleysato koobab kubada cagta ah.
“Fernandes wuxuu helay amaan badan bishii lasoo dhaafay, dadku waxay isbarbardhigeen Eric Cantona iyo wixii la mid ah.
“Laakiin Cantona wuxuu ku guuleystay koobab. Fernandes waxba ma uusan qaban caawa.
Ciyaaryahanadda waa weyn waa kuwa ka soo muuqanaya kulamada waa weyn waana taas wixii uu Cantona sameyn jiray si uu koobab ugu guuleysto. Waana halka ay kooxdani ka gaabiyo.
“Waxay ubaahan yihiin hal ama labo ciyaartoy oo dheeri ah, shaki kuma jiro inay ubaahan yihiin dhiirogelin xoogan si ay udhaqaaqaan afar kulan.
“Iyadu ma aysan qabin dareenkaas caawa. Laakiin amaan ayaa loo hayaa Man City. United waxa ay la ciyaartay koox fantastik ah caawa oo soo bandhigtay oo sameysay qaab ciyaareed cajiib ah.”
5 Facet Results of Consuming a Smoothie Each Day
the military intervenes in parliament solely